Ra’iisul Wasaare Rooble oo wasiiru dowlihiisa u magacaabay socod siinta doorashada xilli aan weli la heshiin
January 13, 2021 Xuseen 1
Puntlandtimes (Muqdisho)-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa Wasiiru Dowlaha Xafiiskiisa Cabdi Xakiim Xasan Ashkir u xil saaray dardar gelinta howlaha doorashooyinka dalka.
Iyadoona weli muran xoogan uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka ayaa Cabdi Xakiim Xasan Ashkir waxaa loo xilsaaray isku xirka iyo wada shaqeynta Xukuumadda, dowlad Goboleedyada iyo Hey’adaha Caalamiga howlaha la xiriira habsami u socodka doorashooyinka.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa la faray Wasiiru dowlaha xafiiska Ra’iisul Wasaaraha in uu dardar geliyo howlaha loo igmaday ee ah isku xirka iyo wada shaqeynta Xukuumadda, dowlad Goboleedyada iyo Hey’adaha Caalamiga howlaha la xiriira habsami u socodka doorashooyinka.
“ Iyda oo laga amba qaadayo habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashada 2021 ee guddiyada heer federaal, xalinta khilaafaadka ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federal lana meelmarinayo qodobada heshiiskii Muqdisho lagu gaaray 1-kii Bishii Semtember ee la xiriiray doorashooyinka ayaa waxaa Wasiiru dowlaha xafiiska Ra’iisul Wasaaraha loo xil saaray dardar gelinta & taaba-gelinta howlaha doorashooyinka ayaa lagu yiri” Qoraalka Ra’iisul Wasaaraha.
Waar waa caynkaa!
Rooble waa xoogsanayaa, waayo waxa ugu muhiimsan ee xukuumaddiisu loo doortay waa in ay dalka doorasho galiso ka hor 8da Febraayo, marka waa uu ku khasban yahay in uu wax uun MALMALLUUQO. Run ahaantii culayska ugu weyn waxa uu haystaa waa ra’iisal wasaare Rooble. Ninka la yiraahdo Deni & reer Garoowe aad bay ula dagaallameen Qoor-Qoor & Rooble.
Waagii Sama-reeb baxdayna uyakaa libta ka hor istaagay, Rooblena uyakaa lugta ku dheggan. Marka, waxa muuqata in wiilka reer Cadaado uu wax badan ku soo fahmay shirkii Garoowe. Marka ay halkaa botorinayso, waxa muuqata in dagaal shaanshiyeedka ugu weyn uu ka dhaxeeyo Garoowe oo hal dhinac ah & Galmudug & Rooble oo dhinac ah. Qoladan murashixiinta la baxday waxbaba lagama qoreen haddii maamulladu iswada raacsan yihiin.
Sidaa daraadeed, dagaalku waa ka dhab Gal-mudug & Rooble. Waxaad kale oo xasuusataan sidii wasiirka koowaad loogu bahdilay Garoowe ee mashruuciisii laadka loogu dhuftay. Dagaal adag bay Puntland la gashay wasiirka koowaad iyo Gal-mudug ba. Haddaba waa ay ku khasban yihiin in ay doorashada dhaqaajiyaan qiima kasta ha ugu kacdee, waa sida dad badani qabaan anna aan taageersanahay.